ASTROLOGY Archives - SANTHITSA
အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း အင်္ဂါသားသမီးများတို့သည် မိမိ၏ အတွေ့အကြုံများအပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းများတွင် အခွင့်အရေးကောင်းများရရှိပြိး အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ ကုသိုလ်ဒါန၊အလှူတန်းကြီးများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ ဘုရားဖူး ခရီးသွားရကိန်း ရှိသည်။ မမျော်လင့်ဘဲ သားသမီးများအတွက် ရပ်ဝေး၊ နယ်ခြား ကောင်းခြင်းခရီး သွားရကိန်းရှိသည်။ မိမိလက်အောက်ငယ်သား တပည့်များအား ထောက်ပံ့ပေးရတတ်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးများ လေ့လာဆောင်ရွက်ရမည်။ စာပေလေ့လာပြိး လုပ်ငန်းခွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုလျှင် အထူးခံစားခွင့်ရခြင်း၊ စက်မှုလက်မှုပညာရပ်များတွင် အထူးအောင်မြင်မှုရရှိမည်။ ယခုနှစ်တွင် (16. 4. 2022 မှ စ၍ ( 16. 6. 2022) အထိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကျိူးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းမည်။ သစ်သီးဝလံများ …
တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း
တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္လာသားသမီးများတို့သည် ဦးတည်ချက် ပြောင်းလဲပြိး လုပ်ငန်းများ လုပ်ရတတ်သည်။ မကြာခဏ ခရီးသွားရကိန်း ရှိသည်။ မမျော်လင့်ဘဲ ငွေးကြေးများ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထီပေါက်ခြင်းများ ရှိမည်။ အက္ခရာ – (ဟ. စ. လ. အ) အစပါ နာမည်နာမ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ အထူးအကျိူးပေးမည်။ (15. 4. 2022 မှ 15. 6. 2022) အထိ လူမျိူးကွဲ၊ ဘာသာကွဲများနှင့် လုပ်ငန်းစပ်တူ ပြုလုပ်လျှင် အောင်မြင်မည်။ သို့သော် အပြိုင်အဆိုင်များကြောင့် အနှောက်အယှက်များ ဝင်လာတတ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် (3)လပိုင်း၊ (8)လပိုင်း၊ (10)လပိုင်း ထိုလများတွင် လုပ်ငန်းသစ်များ …
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း ဤနှစ် (14. 4. 2022) မှ စ၍ မိမိလုပ်ကိုင်ချင်သော ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲတတ်သည်။ တပည့် ကျေးကျွန်များ တလွဲတချော် ပြုလုပ်တတ်သည်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်တတ်သည်။ နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိူးသားချင်းနှင့် မိတ်သဂ်ဟများ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ ခံစားရမည်။ ပျိူရွယ်သူများ ဖူးစာရှင်အသစ်နှင့် တွေ့ပြိး စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းများ ရှိမည်။ သို့သော် အလောတကြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းများ မကောင်းပါ။ ပျိူရွယ်သူများ ဝေးကွာနေသူများနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းရကိန်း ရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ သားသမီးများ၏ သတင်းထူးများ ကြားရမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အစား၊ အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။ …
စနေသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း
စနေသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း စနေသားသမီးများတို့သည် ကုသိုလ်ဒါနများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ သွားလာရကိန်း ရှိသည်။ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများ ရှိမည်။ မိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှိသလောက် အကျိူးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းမည်။ ပေါ်ပေါက်လာသော အခွင့်အရေးကို လက်တွေ့အသုံးချ၍ ငွေကြေးဓနဥစ္စာများ ဖြစ်ထွန်းလာနိုင်၏။ စက်ပစ္စည်းမောင်းနှင်းခြင်း၊ ကိုယ်တွယ်ခြင်းများနှင့် ဒုတ်၊ ဓား၊ လက်နက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ တွေ့ကြုံရတတ်ခြင်းကြောင့် အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ။ ပွဲလမ်းဘဘင်နှင့် လူနေထူထပ်သော နေရာများတွင် သွားလာခြင်း သတိထားရမည့် နှစ်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် (16. 1. 2022 မှ စ၍ ( 16 .4. 2022) အထိ စီပွားရေးများ …
သောကြာသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း
သောကြာသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း သောကြာသားသမီးများတို့သည် သူတစ်ပါးအပေါ် အားကိုးမရသော ကာလဖြစ်သည်။ မိမိ၏ အတွေ့အကြုံများအပေါ် မှုတည်ပြိး လုပ်ငန်းများ ကြိုးစားအားထုတ်ပြိး၊ အခွင့်ကောင်းများနှင့် အောင်မြင်မှုများ ဆွတ်ဆူးနိုင်မည်။ ယခုနှစ်တွင် (16. 1. 2022 မှ စ၍ ( 16. 6. 2022) အထိ အရာရာတွင် သတိနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ တပည်ကျေးကျွန်များ တလွဲတချော် ပြုလုပ်တတ်သည်။ ရင်းနှီးသောသူများနှင့် မိမိကြား အယူအဆ သဘောထား မကိုက်ညီမှုများ ကြုံတွေ့ရမည်။ ဂီတအနုပညာလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ ယာဉ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်၊ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်၊ သစ်သီးဝံလံရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ခြင်း အထူးကောင်း၏။ မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွက် ရာထူးပြောင်းခြင်း၊ …
ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း
ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း ကြာသပတေးသားသမီးများတို့သည် လုပ်ငန်းခွင့်အတွက် မကြာခဏ ခရီးထွက်ရခြင်း ရှိပြိး အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးကိစ္စ ဆောက်ရွက်ရမည်။ မမျော်လင့်ဘဲ ငွေကြေးများ ဝင်လာတတ်သည်၊၊ အိမ်ခြံမြေ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရကိန်း ရှိသည်။ စက်စ္စည်းနှင့် အိမ်ခြံမြေ ဝင်ကိန်း ရှိသည်။ မိမိလွယ်ကူမည်ဟု ယူဆသော ကိစ္စများ အနှောက်အယှက် ပေးခြင်း ခံရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မသမားသူတို့၏ လိမ်လည်းမှု ခံရမည်။ စကားမတည်သူများ၊ စကားကို ဒွိဟပြောဆိုတတ်သူများနှင့် ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် (16. 4. 2022 မှ စ၍ ( 16. 6. 2022) …
This Year : 25220